2। रहस्यमय निकोटिनमाइड Mononucleotide (NMN)
3। निकोटिनमाइड Mononucleotide र NAD +
4। चूहों मा निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड कार्य को नवीनतम अनुसन्धान
5। Nicotinamide Mononucleotide (NMN) देखि लाभ
6। के निकोटिनमाइड Mononucleotide (NMN) वास्तव मा मानव मा काम गर्दछ?
7। कसरी निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड (एनएमएन) को प्रयोग गर्न को लागी एंटी एजिंगको लागी?
8। निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोइड साइड इफेक्ट तपाईलाई थाहा छ
9। मैले कहाँबाट एन्टिगरेसन ड्रग्स पत्ता लगाउन सक्दिन - निकोटिनमाइड Mononucleotide (NMN)?
के तपाईं मरिनुको विरुद्धमा मृत हुनुहुन्छ? खैर, एक बुढापेक्षा विरोधी औषधि निस्सन्देही देखि तपाईंको जैविक घडी को बदलन को सबै भन्दा अधिक विश्वसनीय विकल्प। निकोटिनमाइड Mononucleotide (एनएमएन), senescence मा यसको भूमिका, र कसरी उपचार प्राप्त गर्न को महत्वपूर्ण पहलुहरु मा एक नजर राख्नुहोस्।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थानबाट उच्च सम्मानित डाटाबेस
बढ्दो पुरानो अपरिहार्य छ। यद्यपि, उमेर प्रयोग गर्ने प्रक्रिया उल्टाउने क्षमता छ निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटेडाइड। आफ्नो घोडाहरू राख्नुहोस् किनकि म मानव कोशिकाहरु भित्र कसरी जादुई यौगिक काम गर्दछ भन्ने बारेमा व्यापक जानकारी दिनेछु।
खैरो कपाल बुद्धिको बराबर हो!
यो विश्वास सम्भवतया सबै भन्दा राम्रो कुरा हो जुन तपाईं ठूलो कुरा गर्नुहुनेछ। यद्यपि, तपाईंको मुस्कान छोटो समयमा हुनेछ जब तपाईं आफ्नो छाला मा झन्डा लगाउने सुरु गर्नुहोस्। अधिक के के छ, उमेर र शारीरिक दुवै संकलित गर्दछ।
सामना गरौ। को विरोधी उमेर यस स्मार्ट शताब्दीमा अनुहारको क्रीम र सौंदर्य प्रसाधन शल्यचिकित्सा भएको छ। तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ कि यी प्रक्रियाहरू छोटो अवधिका हुन् र गम्भीर प्रभावहरू निम्त्याउने सम्भावना छ।
व्यावहारिक रूपमा, तपाईंले उमेर-सम्बन्धित अवस्थाहरूमा भूमिका खेल्ने सेलुलर र शारीरिक प्रक्रियाहरू बुझेर बुढ्यौलीसँग लड्नुपर्दछ। पछि, यो सेन्सेन्स विरुद्ध लड्ने संयन्त्र निकाल्न सजिलो हुन्छ। एन्टी-एजिंग निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडवर्क्सले जवानी पुनर्स्थापित गर्दछ।
हामी सबैलाई ईमानदारीपूर्वक उमेर चाहान्छौ, ठीक छ? ठीक छ, यो यथार्थवाद अव्यवस्थित हुन सक्छ जब तपाईंको शरीर कमजोरी जारी छ, र तपाईं सबै प्रकारका हृदय रोग, अल्जाइमरको, मेमोरी हानि, र थपको लागि चुम्बक हुनु।
रहस्यमय निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN)
त्यसोभए निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटोइड को बारे मा सबै भन्दा घमन्ड के हो? मलाई बयान गर्न देउ।
NMN दुवै अल्फा (α) र बीटा (β) रूपहरूमा अवस्थित छ। यद्यपि, β-NMN सबैभन्दा सक्रिय रूप हो। यो बायोक्टिव न्यूक्लेटाइड निकोटिनामाइड एडेनइन डाउकोलोटाइड वा NAD + को बायोसोसिसिस मा एक मध्यवर्ती छ।
यो यौगिक स्वाभाविक रूप देखि अवकोष, टमाटर, ककड़ी, क्यूबेज, ब्रोकोली, र कच्चे मासुमा अवस्थित छ। प्रयोगशालामा, यो निकोटिनमाइड मोनोन्युलेलाइटाइड थोक पाउडरको रूपमा उपलब्ध छ।
यसको कच्चा रूपमा, यो CAS नम्बरको साथ पहिचान गर्दछ, 1094-61-7। यौगिक एक न्यूक्लियोसाइड, जस्तै निकोटीनामाइड राइबोसाइड र फस्फेट समूह बीचको प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न हुन्छ।
Preclinical अध्ययनहरुमा, चूहों मा निकोटिनमाइड Mononucleotide काम सेलुलर जैविक रसायन गतिविधिहरु, अल्जाइमर रोग, उमेर देखि संबंधित मधुमेह, जटिलता जो मोटापे र हृदय रोगबाट उत्पन्न हुन्छ मा काम साबित भएको छ। निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटोइडसँग सम्बन्धित यी औषधीय गतिविधिहरूको बावजूद, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खोज विरोधी गतिविधि गतिविधिमा संलग्नता छ।
मानव शरीर मा NMN कोशिकाओं को भित्र ऊर्जा को मुख्य स्रोत हो। तपाईं उमेरको रूपमा, सेलुलर ऊर्जा निकोटीइनमाइड मोनोन्युलेटोडाइडको न्यून स्तरको कारण र एनएएडीको पछिल्लो घटाइको कारण घट्छ। NMN को प्रशासनिक प्रक्रियालाई उल्टाउनेछ र घाटाको लागि क्षतिपूर्ति गर्नेछ।
(1) एनएमएन रहस्यमय कसरी छ?
यी एन्टी-एजिंग ड्रग्स आंतबाट रक्त संचारमा बिजुली जस्तो यात्रा गर्दछन्। केही मिनेटमा, तिनीहरू रक्तप्रवाहमा लगिनेछ। यस कारणका लागि, यो स्पष्ट हुन्छ कि त्यहाँ अणुहरूको बाटोमा कुनै जैव रसायनिक प्रतिक्रियाहरू नहुन सक्छ।
अचम्मको गतिले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई ट्रान्सपोर्टरको सम्भावनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ, जसले सेल ईन्धन वितरणमा सुविधा पुर्‍याउँछ। उदाहरण को लागी, इमाइ र उनका साथीहरु जनवरी,, २०१7मा प्रकाशित आफ्नो भर्खरको अध्ययन मार्फत उत्तर खोज्नको लागि बाहिर निस्के।
बुढ्यौलीको साथ, शरीरले उत्पादन गर्न भन्दा NAD + अधिक प्रयोग गर्दछ। यद्यपि तपाईं निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रयोग गर्नुहुन्छ, प्रक्रिया अझै पनी समयको लागि खेर जानेछ जबसम्म यसको यातायातलाई सहयोग गर्न अणु हुँदैन। रहस्यमय ट्रान्सपोर्टरलाई उजागर गर्न स्क्रोलिंग जारी राख्नुहोस् जुन aging ०% बुढेसकालको जटिलताको समाधान गर्दछ।
(2) Nicotinamide Mononucleotide संरचनात्मक सूत्र
(3) Nicotinamide Mononucleotide निर्दिष्टीकरण
उत्पादन नाम कच्चा निकोटीइनमाइड Mononucleotide (NMN) पाउडर
CAS no। 1094-61-7
अनुभविक सूत्र C11H15N2O8P
आणविक वजन 334.221 जी / mol
रूप सेतो स्फटिक पाउडर
विलेयता, घुलनशीलता पानी घुलनशील
भण्डारण तापमान -20 ° C
अन्य नाम · निकोटीनामाइड-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5'-phosphate · Β-nicotinamide mononucleotide · Beta-NMN · निकोटीनामाइड रिबोन्यूक्लियोटाइड · 3-(Aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphonato-beta-D- ribofuranosyl)pyridinium · Nicotinamide ribonucleoside 5'-phosphate
निकोटिनमाइड Mononucleotide र NAD +
दुबै निकोटिनमाइड Mononucleotide र NAD + सेल्युलर ईन्धन वितरणमा महत्त्वपूर्ण बायोमार्केटरहरू छन्।
NMN निकोटिनामाइड एडेनइन डीन्युलोटाइड (एनएडी +) को जैव संश्लेषण मा एक मध्यवर्ती छ। पदार्थ विशेष एंजाइमहरु को लागि एक सब्सट्रेट जस्तै काम गर्दछ निकोटीइनमाइड Mononucleotide adenylyltransferase, जो मानव शरीर मा NAD + मा परिवर्तित। गिरावटमा, यो परिसर परिवर्तन nicotinamide मा। त्यसोभए, यो एनएनएन गठन गर्ने अर्को उत्प्रेरक प्रतिक्रिया निकोटिनमाइड फास्फोरिओबिलिलेटरफेस (एनएएमपीटी) समावेश गर्दछ।
यी दुई अणुहरू सम्बन्धित छन् कि तिनीहरू मध्ये कुनै पनि अभावले अन्यलाई असर गर्नेछ। उदाहरणका लागि, उदाहरणका लागि, जब NMN को स्तर इष्टतम भन्दा कम हुन्छ, सम्भवतः senescence को कारण, त्यसपछि NAD + को मात्रा अस्वीकार हुनेछ।
तपाईं उमेरको रूपमा, केहि एंजाइम कार्यहरू उपभोग गर्ने NAD + ले शरीर भन्दा बढी ईन्धन उत्पन्न गर्न सक्छ। सिंथुआन, एनएडीईएस, र पाली-एडीपी रिबोज बहुलक (PARP) एंजाइमहरूको अंश हो, जसले एनएडी + लाई यसको रिफ्रेसनमा जलाइदिन्छ।
तथापि, सेलुलर ईन्धनको गिरावट अनियमित छैन। उदाहरणका लागि, क्षतिपूर्ति डीएनएको मरम्मतमा PARP एड्स समावेश गर्ने एंजाइमिक प्रतिक्रिया लिनुहोस्। साथै, सेलुलरले सेलुलर चयापचय सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
जे होस् यी दुई बायोमार्करहरू बीच फार्माकोलोजिकल सम्बन्ध छ, तपाईं कहिले पनि सिधा प्रणालीमा NAD + प्रशासन गर्न सक्नुहुन्न। जति धेरै विधि सम्भव छ, यसका साइड इफेक्टहरू अपर्याप्त हुनेछन्। उदाहरण को लागी, एक उच्च खुराक थकान, चिन्ता, र अनिद्रा द्वारा विशेषता हो। अधिक के हो, प्लाज्मा झिल्लीको माध्यमबाट कम्पाउन्ड कम पारगम्य हुन्छ।
(1) अवशोषणको तंत्र
यो विरोधी उमेर निकोटीइनमाइड Mononucleotideमौखिक औषधिको रुपमा उपलब्ध छ। यसको अवशोषण गटल को पर्खाल को माध्यम ले र परिसंचरण प्रणाली मा लगभग तीन मिनेट मा शुरू हुन्छ। 15 द्वाराth मिनेट, यो सबै लिईनेछ। इमाइ र उसको सह-अन्वेषकहरूले विस्तृत अध्ययनले यो प्रोटेनन छ कि यो छिटो अवशोषण दर गति गर्दछ कि त्यहाँ छ।
ऊतकमा एसिम्मेलेशनमा एनएनएनले सजिलैसँग NAD + लाई सुचारु रूपान्तरित भण्डारणको लागि रूपान्तरण गर्छ। चयापचय प्रक्रिया आधा घन्टा लाग्न सक्छ। NAD को एकाग्रता + कंकाल मांसपेशियों, सफेद एडिपोज ऊतक, लिभर, र कोर्टेक्स मा प्रचलित छ। तथापि, निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड को दीर्घकालिक प्रशासनले अन्य अङ्गहरु जस्तै ब्राउन एडिपोज ऊतक को NAD + को स्तर को माथि राखयो।
(2) NMN बायोसाइनटिकल मार्ग
स्तनपान कक्ष भित्र, NAD + कमीको लागि क्षतिपूर्ति गर्न तीन फरक मेटाबलिक मार्गहरू छन्।
①डे डेवो मार्गवे
डे नोवो एक लैन शब्द है, जिसका मतलब "सुरुबाट।" यहाँ, न्यूक्लिटाइड्स tryptophan वा nicotinic एसिड बाट प्राप्त हुन्छ, जुन मुख्यतः NMN-rich foods बाट सुरु हुन्छ।
यस मार्गमा, बायोकोमिकल गतिविधिको क्रमले निकोटीइनिक एसिड मोनोन्युक्लोटाइड, निकोटीइनिक एसिड एडेनाइन डाइओक्लोटाइड, र अन्तमा एनएडी + धेरै प्रत्याशित को गठन गर्न जान्छ। डे नोवो कुल सेलुलर ईंन्धन को 15% को उत्पादन गर्दछ।
यहाँ, बाटो डीएनए तोडफोड गर्दा अवस्थामा न्यूक्लिओसाइडहरू पुनर्प्राप्त गर्दछ। यसले कुल NAD + भन्दा बढी 80% को खाता बनाउँछ, जुन मानव शरीर सेलुलर प्रकार्यहरूको लागि आवश्यक छ। ताजा NAD + को संश्लेषण को लागि मार्ग nicotinic एसिड र निकोटिनमाडाइड दुवै पुन: प्रयोग गर्दछ।
निकोटिनट फास्फोरिबिलिलेटरफेसिसले निकोटीइनिक एसिड मोनोन्युक्लोटाइडको निकोटिनिक एसिडको निर्माणमा गति बढाउँछ। त्यस पछि, निकोटिनमेड मोनोन्यूलेलाइटाइड adenylyltransferase 1 परिणामकारी उत्पादन को एसिसेलाइशन निकोटीइनिक एसिड एडेनन मोनोन्युलेटोइडाइड को उत्प्रेरित गर्छ, र अन्तमा एनएडी + लाई।
मानवमा NMN कार्य यस मार्गमा निर्भर छ।
निकोटिनामाइड रिबोसाइड अर्को एनएडी + तत्काल हो। निकोटिनमाइड रिबोसाइड किनेजको उपस्थितिमा फास्फोरिलेशनमा, बायोमार्केटरले एनएनएनले अर्को एंजाइमिक रूपान्तरणलाई एनएडी + मा पार गर्नु अघि उपज उत्पन्न गर्दछ।
NAD + र NMN को अनुसन्धान मा अनुसन्धान
वर्षौंमा, निकोटिनमाइड एडेनइन डिन्युलोटाइड र यसको पूर्ववर्ती अध्ययन र चिकित्सकीय प्रयोगहरू सबै क्रोध भएका छन्। तथापि, तपाईले यो नोट गर्नु पर्छ विरोधी बुढापेपण मध्य 1900s पछि अनुसन्धान मा व्यापक रूप देखि आयोजित गरिएको छ।
1906 मा, प्रथम विद्वानहरु लाई उल्लिखित छ कि NAD + खमीर मा किण्वन दर को तेज। त्यस पछि, अन्य जैव-रसायनहरूले यसलाई न्यूक्लिओटाइडको रूपमा वर्गीकरण गरेर सूट गरे।
1937 मा उनको अनुसन्धान को माध्यम ले, कन्स्ट्र्रा एलिवहिम को पाया कि निकोटीइनमाइड र निकोटीइनिक भिटामिन हो र एनएडी + को पूर्ववर्ती। पछि, उनले पत्ता लगाए कि यी दुईहरूले कुत्तोंमा पेलियागलाई कम गर्न सक्थे। कारण यो छ कि निकोटीइनिक एसिड र निकोटिनमाइड को स्तर रोग देखि पीडित व्यक्तिहरु लाई अधिकतम भन्दा कम थियो।
१ 1963 InXNUMX मा, वैज्ञानिकहरूको टोलीले स्थापना गरे कि चूहोंमा निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडले डीएनए-निर्भर एन्जाइमहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ, जुन सेलुलर कार्यहरूलाई बढावा दिन महत्वपूर्ण थियो। दुई वर्ष पछि, केही अनुसन्धानकर्ताहरूले ट्रिपटोफान र निकोटीनिक एसिड समावेशी NAD + बायोकेमिकल मार्गहरू प्रकाशमा ल्याए।
तब देखि, जैव-रसायनहरूले NMN र NAD + अनुसन्धानमा रुचि देखाउन राखेका छन्। यस समयमा, महत्त्वपूर्ण फोकस यिनीको महत्त्वमा छ विरोधी बुढो औषधीहरू लामो समयदेखि उमेर र जटिल उमेरका जटिलताहरू।
चूहों मा निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड कार्य को नवीनतम अनुसन्धान
त्यहाँ मिरिन मोडेलहरू मा अनगिनत पूर्वनिर्धारित अध्ययनहरू छन् जसले निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटेइडाइड (एक्सएनएक्सएक्स-एक्सएनएक्स-एक्सएनएक्सक्स) को चिकित्सकीय फाइदाहरू फैलाउँछ।
केहि मा ध्यान केन्द्रित गरौं, जसले जैव रसायनमा क्रांतिकारी प्रभाव पारेको छ।
(1) सिन्क्लियरको अनुसार, एनएडी + युवापनको फाउन्टेन हो
डा। सिन्क्क्लेयर र तिनका सहयोगीहरूले उमेरको उल्टाउने क्रममा निकोटीइनमाइड मोनोन्युलेलाइटाइड र एनएडी + को सम्भावनाबारे अनुसन्धानको धेरै टुक्रा प्रकाशित गरेका छन। उनको 2013 अध्ययनको अनुसार, सिङ्कक्लेयर र टीमले थाहा पाएअनुसार 22-महिना पुरानो चूहहरुमा6दिनका लागि एनएमएन ले मांसपेशी क्षमता, चयापचय र सहनशीलतामा सुधार देखाए।
पछि एक 2016 शोध पत्रमा, समूहले पुष्टि गर्यो कि एनएमएनले यस्तै अनुभवको रूपमा पनि लाभ उठाउनुभयो। दैनिक ट्रेडमिल मा दौडने भन्दा बरु, तपाईले अझै पनि त्यस्ता प्रभाव अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाई यसको सट्टा निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड पूरक प्रयोग गर्नुहुन्छ।
यस हार्वर्ड जेनिनेटिस्टको अनुसार मानवअधिकारमा एनएनएन काम वृद्ध र अभिजात वर्ग एथलीटहरूमा रक्तवाह प्रवाहको वरिपरि घिमिरे हुन्छ।
(2) मिल्स को आश्वासन दि्छ कि NMN चूहों मा भौतिकीय गिरावट को कम गर्दछ
2016 अध्ययनको सन्दर्भमा, मिल्स एट अल। NMN उपचारले पुरानो मुसाहरूमा शारीरिक र इम्युनोलोजिकल दुवै प्रकारको गिरावटको सामना गर्ने पत्ता लगाए। यस NMN पूरक अनुसन्धानको अन्त्यमा, कृन्तकहरूले प्रतिरक्षा कोशिकाहरूको अभिव्यक्ति, लिम्फोसाइटिक प्रसार, र न्यूट्रोफिलहरूमा संकुचनमा वृद्धि दर्ता गरे।
यस अघि, २०११ मा, मिलहरू, योशिनो र इमाईले चूहों मोडलहरू प्रयोग गरेका थिए जसले आहार-प्रेरित र उमेर-सम्बन्धित मधुमेहको उपचारमा एनएडी + को भूमिका पुष्टि गर्दछ। अझै अर्को २०१ study को अध्ययनमा उनले अन्य अनुसन्धानकर्ताहरूसँग हात मिलाए जसले स्थापित गरे कि एनएमएन पूरकताले बुढेसकालको चूहोंमा अक्सिडेटिभ तनाव र भास्कुलर डिसफंक्शनको विरूद्ध लड्नेछ।
(3) मुरानो मोडेलहरूमा NMN Combats अल्जाइमर रोग (AD)
२०१ 2015 मा, Long et al। अल्जाइमर रोगको साथ चूहोंमा मस्तिष्क माइटोकोन्ड्रियल श्वसन घाटामा NMN को प्रभावको अनुसन्धान गर्‍यो। टोलीले टिप्पणी गरे कि NMN उपचारले AD को इटियोलजीको उपचार गर्न सक्षम छ, कम OCR (अक्सिजन खपत दर), NAD + फलोफ, र mitochondria असामान्यता सहित।
२०१ 2016 मा, वाang र उनका सहयोगीहरूले अनुसन्धान प्रकाशित गरे, जुन उनीहरूको निष्कर्षमा थियो विरोधी उमेर ड्रग्स संज्ञानात्मक र तंत्रिका कमजोरी लड्छ, जुन β-amyloid (Aβ) ओलिगोमरबाट हुन्छ। यो Aβ प्रोटीन न्यूरोटोक्सिक हो र AD बिरामीहरूको दिमागमा पट्टिका गठनको लागि जिम्मेवार छ। वाang्ग एट अल। निष्कर्षमा पुगे कि चूहोंमा NMN प्रशासनले Aβ ओलिगोमर घटायो, जसले संज्ञानात्मक कार्यहरूलाई बढावा दियो।
एक 2017 अध्ययन पछि, ह्वा र उनका साथीहरूले पत्ता लगाए कि NAD + पूरककरणले β-amyloid oligomers को उत्पादन घट्यो। एक वर्ष पछि, याआ र उनको टोलीले निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटोइडाइड एडी-टीजी मूरिन मोडेलमा ए ए ए र सिप्प्टिक हानिको संचय कम गर्छ।
(4) NMN र कार्डियो-सुरक्षा
२०१ama को Yamamoto र तिनका सहकर्मीहरूको प्रकाशन अनुसार, NMN हृदयलाई इस्केमिक चोट र पुनःसम्फुजनबाट बचाउँछ। यस अध्ययन भन्दा पहिले, याममोटो २०१२ टोलीका हिस्सा थिए, जसले पत्ता लगाए कि एनएडी + चूहोंमा डाइट-प्रेरित मोटापा काउन्टर गर्दछ।
२०१ 2016 मा, डे पिक्किओटो एट अल। र उनका साथी बायोकेमिस्टहरूले बुढेसकाल चूहों को संवहनी कार्यक्षमतामा NMN पूरकको प्रभाव अध्ययन गरे। अनुमानबाट, निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड भास्कुलर डिसफंक्शन, अक्सिडेटिभ तनाव र ईलास्टिनमा कमीलाई उल्टाउन प्रभावकारी साबित भयो।
(5) शिन-इरिकेरो इमई द्वारा सेल इन्धन डिलिवरीको नयाँ मार्गमा डिस्कवरी
हालको अनुसन्धानमा, इमईका नेतृत्वमा वैज्ञानिकहरूको टोलीले कोशिकाहरूमा एनएमएनका रहस्यमय ट्राभपोर्टर पत्ता लगाए र अनियमित गर्यो।
यो NMN पूरक अनुसन्धान जनवरी 2019 मा पहिलो उपलब्ध थियो प्रकृति चयापचय। इमईले स्थापना गरे कि एक विशेष प्रोटीन, Slc12a8, NMAD को एनएमएन को तीव्र रूपान्तरण को लागी जिम्मेदार छ र यसलाई सेल मा स्थानांतरित गर्दछ। यो एंजाइमले युवा वा स्वस्थ व्यक्तिहरूको तुलनामा पुरानो व्यक्तिहरूमा महत्त्वपूर्ण छ।
सबै अनुसन्धान अध्ययनहरूमा, अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूले चूहोंमा प्रशासन गर्नु भन्दा पहिले निकोोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड बल्क पाउडरको ज्ञात उपायहरू पानीमा विघटन गर्दछन्।
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) देखि लाभ
NMN सँग मानव शरीरमा धेरै चिकित्सीय कार्यहरू र औषधीय प्रभावहरू छन्। एक दशक भन्दा कम समयमा, वैज्ञानिकहरूले आफ्नो समय सबै निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड लाभहरू अध्ययन गर्न समर्पित गरेका छन् जसमा बुढ्यौली र उमेर-सम्बन्धित रोगहरूको व्याख्या गर्ने संयन्त्रहरू समावेश छन्।
मानव प्रणालीमा भएका यौगिकहरुका फाइदाहरू जान्न गरौं।
(1) सेलुलर जीवन को लंबाई
21 को सुरूमाst शताब्दीमा, विद्वानहरूले अपरिवर्तनीय प्रक्रियाको रूपमा उमेरको घोषणा गर्ने पर्याप्त कारणहरू थिए। तथापि, यो धारणा कोटो को किनारा खोज को लागी शून्य बन गयो विरोधी बुढापेपण जस्तै निकोटिनमाइड Mononucleotide।
NMN मानव कोशिकाहरूमा प्राकृतिक-प्रजनन हो र एनएएडी + र ऊर्जाको उत्पादनको जैविक संसोधनको लागि उत्तरदायी छ। जब तपाईं बूढो हुनुहुन्छ, यी दुई यौगिहरु लाई स्टेम कोशिकाहरु को रिफ्रेश गर्न को लागी उतारना। सम्झनुहोस्, यी कार्यात्मक एकाइहरूलाई लगातार प्रतिकृति गर्न सेलुलर ईन्धन चाहिन्छ, र यसैले, गिरावट सेल्युलर जीवन छोटो छोटो हुनेछ।
एनएमएन जस्ता प्रभावकारी विरोधी उमेरका औषधिहरू व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रक्रियालाई उल्टाउने र उमेर बढ्दो तवरमा विलम्ब गर्ने।
(2) युवा सेलुलर ऊर्जा स्तरहरू विस्तार गर्दै
उमेरको संग सम्बन्धित रोगहरु को मुख्य मूल को सेलुलर स्तर सम्म कम छ। कोशिका भित्र ऊर्जाको उत्पादनमा कमी कम उमेरका लक्षणहरूको मुख्य योगदान कारक हो।
NAD + को पूर्ववर्ती हुनु भएको छ, एनएमएनले सेलको मिनिटोन्ड्रियाको इष्टतम ऊर्जा स्तर को बनाए राख्न को लागी एक भूमिका छ। उमेरले स्वचालित रूपमा NAD + एकाग्रतामा गिरावट ल्याउँछ। नतिजाको रूपमा, उमेर बढ्ने प्रक्रिया पुरानो रूपमा पुरानो उमेरका रोगहरु को विकास को लागि अग्रणी छ।
अत्याधुनिक अंगहरु भित्र सेलुलर ऊर्जा स्तरहरुमा ड्रप जस्तै मांसपेशिहरु, रक्त वाहिकाहरु, गुर्दे, जिगर, वा अग्निहरु लाई शारीरिक र संज्ञानात्मक स्वास्थ्य संग हस्तक्षेप गर्दछ। यो कारण यो हो कि ईसीमिया, हृदय अवस्था, गुर्देको विफलता, न्यूरोडगेरिनेरेसन विकार, र अन्य जस्ता रोगहरू।
उत्तम समाधान भनेको शरीरको पूरक हो निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड र NAD+ बाह्य NMN उपचारको साथ। यी एन्टी-एजिंग ड्रग्सले बुढ्यौली कोशिकाहरूलाई नयाँ जीवन दिन्छ, जसले त्यसपछि जवान लुक दिन्छ।
(3) रक्त सर्कल सुधार
पुरानो समयमा भएको परिवर्तन मध्ये एक मा स्तन निकाय भित्र रक्त वाहिकाहरु को गुणवत्ता मा कमी छ। यसैले, परिसंचरण प्रणाली धेरै पोषक तत्वहरु, ओक्सीजन, गर्मी, वा अंगबाट बर्बाद हटाउँदा जबर्जस्ती हुन्छ। अवस्था निरन्तर भएकोले, यसले लामो समयसम्म रोगहरूको घटनाको समय बढ्न सक्छ।
निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटेइड रगत वाहिकाहरूको उत्पादनको लागि अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार छ। मलाई व्याख्या गर्न अनुमति दिनुहोस्। यौगिक NAD +, synthesizes जो बारी मा sirtuin deacetylase (SIRT1) प्रोटीन सक्रिय गर्दछ।
यसको विपरीत, SIRT1 अक्सीजन मुक्त कणको उत्पादनमा सहायता गर्ने लिस्इन अवशिष्टहरू deacetylates। यो तंत्रमा सम्भावित अक्सिटेक्टिङ्ग तनाव, रिपरफ्युजन, वा इम्मेमिक चोटहरू विरुद्ध लडाइन्छ। साधारण अवस्थामा, शरीर आफैलाई ईमानदारीपूर्वक ischemia र सम्बन्धित रसायनहरू होइसिमिक पूर्ववर्तीकरण (आईपीसी) को माध्यमबाट हुनेछ। त्यसपछि आईपीसीले SIRT1 को उत्पादन लाई प्रोत्साहित गर्नेछ।
तपाईं इज्यामिक कार्यक्रम अघि वा यसको अभिव्यक्तिको समयमा एनएमएनलाई प्रशासित गर्न सक्नुहुन्छ। घटना भन्दा पहिले, कम्पाइले ग्लाइकोलिसिस मार्फत एटीपी उत्पादन बढाएर कार्डियो-सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
ईस्केमियाको मामलामा, तपाईं अझै निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लिओटाइड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनकि यसले एसिडोसिस ट्रिगर गर्दछ र माइटोकोन्ड्रियल त्रुटिहीनताको कारण दिन्छ; तसर्थ, कार्डियाक प्रणालीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै।
(4) मांसपेशी सहनशीलता
रगत प्रवाह घट्दा तपाईं के आशा गर्नुहुन्छ? ठिकै छ, राज्यले मांसपेशिहरूको ठूलो ह्रास निम्त्याउँछ। यो कुनै श doubt्का छैन तपाईले याद गर्नुहुनेछ कि पुराना मान्छेहरुसँग कम प्रदर्शन, कम सहनशीलता, अचल र सबै समय थकित छ।
डा। सिन्क्लेयरले ग्राउन्ड ब्रेकिंग अन्वेषण मध्ये एक मांसपेशिको शक्ति बढाउन NMN को दक्षतामा केन्द्रित थियो। उसको २०१ 2013 र भर्खरका २०१ 2018 को अध्ययनका अनुसार सात दिन सम्म NMN उपचारमा लागेको पुरानो चूहों शारीरिक रूपमा फिट र उनीहरूको कन्सलहरू जस्तै सक्रिय भए।
सबैभन्दा पुरानो मुसा (३० महिना पुरानो) को मांसपेशी क्षमता र सहनशीलता पाँच महिनाको जवान बच्चाको जस्तै थियो। यी उमेरहरू मानवमा लगभग 30 र 70 वर्षसँग तुलना गर्न सकिन्छ। खोजहरूबाट, तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि NMN ले मानवमा मृत्युको रूपमा काम गर्दछ।
(5) Neurodegenerative Disorders Combining
मस्तिष्क तपाईंको प्रणालीको एक पावर जस्तै हो। यो पहल हुन सक्छ किनकि मृत्युको समय घोषणा गर्दा मेडिक्स सधैँ मस्तिष्क कार्यहरूमा निर्भर रहन्छ।
मस्तिष्कमा NAD + को स्तरमा कमीले वृद्धहरूको बीच संज्ञानात्मक स्वास्थ्यको हस्तक्षेप गर्दछ। एनएमएन को प्रशासन एनएडी + उत्पादन बढाता छ, यसैले तंत्रिका कार्य को रक्षा गर्दछ।
धेरै अध्ययनहरूले प्रमाणित गर्छ कि निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडले ज्ञान, स्ट्रोक, र स्मरणशक्ति हानिमा बाधा पुर्‍याउँछ, जुन बुढेसकालमा प्रचलित हुन्छ। संक्षेपमा, यो विरोधी उमेर पूरक न्यूरन्सको मर्मतका लागि जिम्मेवार हुन्छ।
एनएमएनले मुख्यतया कुनै पनि न्यूरोलोजिकल अवस्थाको इटियोलजीलाई लक्षित गर्दछ। उदाहरण को रुपमा, अल्जाइमरको रोग NAD + मा कमी, दिमागमा अक्सिजन खपतको कम दर, र माइटोकन्ड्रियल असामान्यताका कारण देखा पर्दछ। शरीरमा NMN को मात्रा बढाउँदा यी सबै प्रभावहरूको काउन्टर गर्दछ।
२०१२ मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार, निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडले प्रभावकारी ढ in्गले इंट्रासेरेब्रल क्षतिलाई व्यवस्थापन गर्दछ, जसले अक्सर स्ट्रोक निम्त्याउँछ। पुरानो चूहों जो NMN खुराक अन्तर्गत थिए इंट्रासेरेब्रल NAD + उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार दर्ता गर्दछ। यी अनुसन्धान मोडेलहरूले इस्कीमिक स्ट्रोक, न्युरोल मृत्यु र न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लेमेन्ट बिरूद्ध अधिकतम सुरक्षा प्राप्त गर्थे।
(6) पुरानो उमेरमा सुधारिएको चयापचय
धेरै शोधकर्ताहरूले अध्ययन गरेका छन् र प्रमाणित गरे कि NMN ग्लुकोज सहिष्णुतालाई सहज बनाउँछ जबकि गहिरो आहार संग चिनो चूहों मा चिनो को चयापचय को बढावा गर्दछ। यस अध्ययनले वृद्ध मानवहरूलाई पनि लागू गर्दछ जुन मधुमेह विकास गर्दछ वा उच्च शर्करा वा खराब पोषणको परिणामस्वरूप। यसबाहेक, मोटोमा अमीर आहारले इन्सुलिन प्रतिरोध गर्न पाउँछ।
निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटेडाइड NAD + को चोटी उत्पादन को बनाए राख्छ, जो बारी मा उमेर सम्बन्धी सूजन कम हुन्छ जबकि वसा अंगहरुमा इंसुलिन को सक्रियता मा सुधार गर्छन।
(7) मधुमेहको उपचार
टाइप २ मधुमेह भएका व्यक्तिहरू सँधै ईन्सुलिनको प्रतिरोध प्रदर्शन गर्छन्। यो विशेषता NAD + मा एक गिरावटको कारण हो। नतिजा स्वरूप, कोषहरू अक्सिडेटिभ तनाव र सूजनबाट गुज्रन्छन्। यदि तपाईं अझै जवान हुनुहुन्छ भने, शरीरले केही अन्तर्जात शारीरिक क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट कायाकल्प गर्दछ। जे होस्, वृद्धावस्थासँगै, NAD + स्तरहरू जीवन-समर्थन गर्ने अंगहरू जस्तै हड्डी मांसपेशीहरू, कलेजो, मस्तिष्क, र अग्न्याशयमा घट्छ।
उमेर-सम्बन्धित मधुमेहमा अर्को योगदान पुर्‍याउने एक उच्च-फ्याटयुक्त आहार हो। संतृप्त फ्याटको असामान्य मात्राले एनएडी + को बायोसिन्थेसिस रोक्छ। उमेर र आहार-प्रेरित मधुमेहको उपचारमा निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न योशिनो र उनका सहयोगीहरूले दुईवटा चूहों मोडलहरू प्रयोग गरे।
लगभग १० दिन NMN को एक दैनिक खुराक दिए पछि, विद्वानहरूले स्थापित गरे कि उच्च चर्को खानाको अधीनमा रहेको चूहोंले सुधार गरिएको इन्सुलिन असहिष्णुता रेकर्ड गर्‍यो। अर्कोतर्फ, मधुमेह माईसले हाइपरलिपिडेमियामा उल्लेखनीय सुधार देखायो।
पुरानो स्वास्थ्य जटिलताहरू सधैं उमेरको प्रक्रिया सँगसँगै। जब शरीरले थुप्रै शारीरिक परिवर्तन ल्याउँछ, केहि सेलुलर प्रकार्यहरू पछाडि जान्छ। उदाहरणका लागि लिनुहोस्, निकोटिनमाइड एडेनइन डिन्युलेटोइडको स्तर धेरै अंगहरूमा कमी हुन्छ, सेलको मिनिटोन्ड्रोयन द्वारा ऊर्जा उत्पादनमा गिरावटको कारण।
गतिशील अणुहरू, वासुलुल अक्सिडिएट तनाव, र अन्य संज्ञानात्मक विकारको कारण डीएनए को हानिकारक विभिन्न कारकहरु मा अग्नि सेट। के तपाईंलाई थाहा छ के हुन्छ? ठीक छ, त्यहाँ मानव प्रणालीमा डीएनए-मरम्मत प्रोटीन (PARP1) छ। डीएनए क्षतिको अवस्थामा, NAD + ले यो प्रोटीनलाई प्रभावित सेल को मरम्मत गर्न सक्रिय पार्दछ।
धेरै अध्ययनहरूले वृद्धावस्थामा निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड फाइदाहरू लिएका छन्। उदाहरणका लागि, मिल्स र उनका सहकर्मीहरूले NMN उमेर-प्रेरित शारीरिक गिरावटको प्रभावको अनुसन्धान गर्न चूहों मोडेलहरू प्रयोग गरे।
अध्ययनमा, शोधकर्ताले उल्लेख गरे कि उपचारको लामो-समय प्रशासनले लिभर, कंकाल मांसपेशिहरु, र एडिपोज ऊतक भित्र सम्झौता जीन को अपग्रेड गरे। अधिक के छ, निष्कर्षों प्रतिरक्षा कोशिका अभिव्यक्ति मा सुधार को पुष्टि, लिम्फोसाइट मा वृद्धि, र लेक्कोसाइट को सक्रियता।
उमेरको अर्को विशेषता आँख निधिमा लाइट-रंगको स्पॉटको उपस्थिति हो। हड्डी घनत्व कमजोरी र आँसू उत्पादन गर्न असक्षमता सँगसँगै यो अवस्था रोडेन्टहरूमा राम्रो तरिकाले अध्ययन गरिएको छ। वैज्ञानिकहरूले देखाए कि चिसो, जो 12-महिना एनएमएन उपचारमा राखिएको थियो, सबै माथिको अवस्था उल्लेखित थिए।
दीर्घयुद्ध एक मात्र कारण हो जुन मानिसहरू Nicotinamide Mononucleotide खरिद गर्नुहोस्.
(9) मोटापाको उपचार
बुजुर्गको लागि, एनएमएनले भूख र वृद्धि बीचको बीचको बिनाश बिना नै शुरुआती शरीरको वजनको 10 सम्म घटाउन सक्छ। मोटापा र मधुमेहको दिमागी तंत्र सम्बन्धित छन्। कम एनएडी + स्तरहरु mitochondrial रोग को बारे मा ल्याउन; त्यसकारण, एटीपी उत्पादनमा कमी।
मोटाईले कोशिकाहरूको लागि एटीपी ऊर्जा उत्पन्न गर्न मिन्कोचन्ड्रिया क्षमताको मात्रा घटाउँछ। एकपटक निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटाइड को प्रबन्ध गर्दा, दबाउले मोटापेदन सम्बन्धी ग्लुकोज असामान्यता र अन्य चयापचय कार्यहरू सुधार गर्नेछ।
जब रगत प्रवाह सुधार गर्न आउँदछ, मोटोपना उपचार को लागी NMN व्यायाम जस्तै गरी कार्य गर्दछ। एक पिलिल एक ट्रेडमिल दैनिक प्रयोग को रूप मा राम्रो हुनेछ। यद्यपि भिन्नता शरीरका अ organs्गहरूमा NAD + सामग्रीको स्तरमा आउँदछ। जबकि निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड दुबै कलेजो र मांसपेशि ऊतकहरूमा NAD + बढाउँदछ, व्यायामले मांसपेशिको भित्रभित्रै बनाउँछ।
के निकोटिनमाइड Mononucleotide (NMN) वास्तव मा मानव मा काम गर्दछ?
ठिक छ, यो तपाईको टाउकोमा बजिरहेको प्रश्न हो। जे भए पनि, निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लिओटाइड र एनएडी + मा केन्द्रित सबै अनुसन्धान र प्रेक्लिनिकल अध्ययनहरूले मूरिन मोडेलहरूलाई लक्षित गरिरहेछन्।
यदि तपाईसँग मानवमा NMN कामको क्षमताको बारे रिजर्भेसन छ भने, यहाँ सबै तपाईलाई थाहा छ। डा। डेविड सिन्क्लेयर, एक शीर्ष शोधकर्ता, र हार्वर्ड विश्वविद्यालय मा आनुवांशिक एनएनएन को प्राप्तकर्ताहरु मध्ये एक हो।
सिनक्लेयर स्वीकार गर्दछ कि उसले पूरक लिन्छ। हालसम्म, विद्वानले कुनै पनि गंभीर निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड साइड इफेक्ट रेकर्ड गरेका छैनन्। यसको ठीक विपरीत, उनले दाबी गर्छन् कि तीखो दिमागले उसलाई जवान लाग्छ। ह्याovers्गओभर र जेट लगहरू अब उसको लागि विगतको काल हो। उनी अझै जोड दिन्छिन् कि उनका बुबा, जो उनको सत्तरको दशकको अन्तमा छन्, पूरक लिन्छन्।
यसको अतिरिक्त, डा। सिन्कक्लेयरले ब्रघाम र महिला अस्पतालमा प्रारम्भिक परीक्षणको रूपमा उपचारको प्रयोग गरेका छन्। उनको स्वस्थ वृद्ध व्यक्तिहरुमा पूरक परीक्षण को लागी योजनाहरु छ। यद्यपि उनको चरण एक अध्ययन पूरा भयो, उहाँ अझै आधिकारिक प्रकाशन गर्न मिल्दैन। सिन्क्लियरले यस क्लिनिकको दोस्रो चरण सुरु गर्यो NMN पूरक अनुसन्धान 2018 मा।
क्लिनिकल अध्ययनमा जुन १ मा हुनेछst जून 2020, शोधकर्ताओं को संवेदनशीलता मा परिवर्तन र मानव मा NMN पूरक संग beta सेल कार्यहरु को स्थापना को खोज गर्दै छन्। विद्वानहरू वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल अफ मेसिस र टोकियोका केइओ युनिवर्सिटी स्कूल अफ मेसिसका हुन्।
एक मानव परीक्षण मा 2016 मा Keio विश्वविद्यालय मा लटका, विद्वानहरु स्वस्थ वयस्कों मा एनएमएन को सुरक्षा को मूल्यांकन गर्न को लागि थिए। निरन्तर दोस्रो चरणमा, शिन-इरिकेरोको नेतृत्वमा त्यही संस्थान, लामो समयसम्म NMN प्रशासनको खोजी गर्दैछ। अधिक छ, टीम मेटाबालिक-सिन्ड्रोम-सम्बन्धी मापदण्डहरू मूल्यांकन गर्न खोज्दैछ, NMN केनेटिटिक्स, र ग्लुकोज चयापचयमा लागू औषधि।
वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा 2017 क्लिनिकल अध्ययनमा, प्रतिभागिहरु 50 उमेर 55 उमेर मा 75 वर्षहरु मा शामिल थिए। यो समूह आठ सप्ताहको लागि एनएमएन को 250mg को दैनिक खुराक मा राखिएको थियो। यद्यपि उनी स्वस्थ व्यक्ति थिए, यी महिलाहरूसँग कम रक्तचाप, ट्राइग्लिसराइड र बीएमआईको उच्च स्तर थियो। अध्ययन अझै पूरा भएको छैन।
हालसालै त्यहाँ कुनै पनि प्रकाशनहरू छैनन् जुन NMN ले मानवमा काम गर्दछ। जे होस्, तपाईले पर्खनु पर्छ किनभने केहि खाना पकाइरहेको छ र क्लिनिकल परीक्षण आशाजनक हुन सक्छ।
कसरी निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड (एनएमएन) को प्रयोग गर्न को लागी एंटी एजिंगको लागी?
यदि तपाईं निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटेइड किन्नु भएको छ भने, तपाइँलाई थाहा पाउन केहि चीजहरू छन्।
तपाईं केवल उपचार को आहार पूरक को रूप मा ले सकते हो किनकि यसले अब सम्म एक नुस्खा औषधि हुन को लागी अंतिम एफडीए समर्थन प्राप्त नहीं गरेको छ।
खुट्टाले स्वास्थ्य लाभहरू प्राप्त गर्न चाहानु भएकोमा 25mg र 300mg बीचको दायरामा पर्दछ। तथापि, केहि मान्छे प्रति दिन 1000mg सम्म लिने स्वीकार। उदाहरणका लागि, डा सिन्कक्लेयरले 750mg / दिन लिन्छ। यसबाहेक, उनले यो नियम रिभरभरट्रोल र मेटाफर्मिनको साथ पुर्याउँछ।
एनएमएन नैदानिक ​​परीक्षणहरुमा, अधिकांश शोधकर्ताहरुले आफ्नो विषय 100mg को 250mg को खुराकमा राख्छन्।
Oral बनाम Sublingual
यदि तपाईं यस पूरकको जैवव्यावधिलाई अधिकतम गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले सुब्बत व्यवस्थापनको लागि निकोटिनमाडोन मोनोन्युलेटेइड ट्याब्लेटहरू खरिद गर्नुपर्छ। दबाइ निकाल्दा ऊर्ध्वाधरमा अवशोषित मात्रा घटाउँछ। कारण यो मेटाबोलवाद र गिरावट देखि गुजर रहेको छ किनकी यो पाचन पथ र जिगर को माध्यम ले गुजरता छ।
Sublingual NMN बिना रक्तचाप बिना रक्तचाप मा प्रवेश गर्दछ। डिलिवरीको यो विधिको अवशोषण दर मौखिक प्रशासन भन्दा लगभग5पटक बढी छ। यस अवस्थामा, तपाईंलाई लिभरमा पहिलो पास चयापचयको लागि मेकअप बढाउनु पर्छ। तपाईं अनुसन्धान गरिरहनु भएको थियो, तपाईंले अध्ययन पूरा गर्नको लागी तपाईलाई निकोटीइनमाइडाइड मोनोन्युलेलाइटाइड थोक पाउडरको आवश्यकता पर्न सक्छ।
निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोइड साइड इफेक्ट तपाईलाई थाहा छ
सामान्य niacinamide र अन्य भिटामिन बी3कम्पाउन्डनिकटाइनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड साइड एस द्वारा प्रदर्शन गरिएकोसँग पर्यायवाची छ। यद्यपि, अधिकांश व्यक्तिहरूले ती सबै अनुभव पनि गर्दैनन्। उदाहरण को लागी, शीर्ष हार्वर्ड विश्वविद्यालय को अनुसन्धान वैज्ञानिक NMN लिने स्वीकार, तर ऊ कुनै पछाडिको प्रभाव देखेको छैन।
अब सम्म, चूहों मा सबै उपलब्ध निकोटीइनमाइड Mononucleotide काम मा, कुनै डेटा murine मोडेल मा कुनै पनि साइड इफेक्ट को अस्तित्व को दर्शाता छ। कुनै शोधकर्ताले एनएमएन प्रशासनमा छोटो र लामो समयको अवधिमा नकारात्मक लक्षण रेकर्ड गरेको छैन।
केही व्यक्तिहरूले निम्न नकारात्मक अपशन्सहरू अवलोकन गर्न सक्छन्;
एलर्जी प्रतिक्रियाहरू जस्तै सुगन्ध, पित्ताहरू, वा भालाहरू
दुर्लभ अवस्थामा, निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटेडाइड साइड इफेक्ट हदसम्म तपाईले तत्काल स्वास्थ्य जाँच अप खोज्न सक्नुहुनेछ। केहि उल्लेख गर्न को लागि, सांस लेने को कठिनाइहरु, अनियमित दिल को धब्बा, लगातार उल्टी, छाला चिल्ला, र भूख को नोकसान तीव्र लक्षणहरु मा हो।
यस बिन्दुमा, क्लिनिकल परीक्षण केवल 45 को 75 वर्ष सम्म उमेर कोष्ठक मा स्वस्थ वयस्कों मा केन्द्रित गरिएको छ। यस कारणको लागि, निम्न समूहहरू NMN विरोधी उमेरका पूरकहरू व्यवस्थापन गर्नुअघि सतर्क हुनुपर्छ।
गर्भवती र नर्सिङ माईन
एनएनएन को सम्भावनात्मकता को एक इतिहास संग व्यक्ति
रोगीहरु लाई पुरानो बीमारियों को लागी औषधि लेने
मैले कहाँबाट एन्टिगरेसन ड्रग्स पत्ता लगाउन सक्दिन - निकोटिनमाइड Mononucleotide (NMN)?
(1) NMN फूड स्रोतहरू
तपाईं शायद एक अनुहार बनाउँदै हुनुहुन्छ किनकि तपाईले निकोटिनामाइड मोनोनुलेटोइड किन्न सक्नु हुन्छ जब तपाई यसलाई केहि निश्चित खानेकुरामा सजिलै फेला पार्न सक्नुहुन्छ। मलाई छोटकरीको व्याख्या गरौं किन यो पूरक आवश्यक छ।
उमेरको कारणले शरीरमा NAD + घटाउँछ, सेलहरूले प्रभावको सामना गर्न सक्षम छैनन्। यस बिंदुमा, तपाईंको मात्र छनोट NMN पूरक प्रयोग गरी हुन सक्छ। क्लिनिकहरूले तपाईंलाई ब्रोकोली, मशरूम, edamame, या चिंरालो जस्ता NMN-अमीर खाद्य पदार्थहरू लिन प्रोत्साहित गर्नेछन्। तथापि, यी खानाहरूले तपाईको शरीरको आवश्यकता के 5% भन्दा कम मात्र प्रदान गर्नेछ।
एफडीए सिफारिस गर्दछ कि कुनै पनि मानव को प्रति दिन एनएमएन को 560mg को आवश्यकता हो। सुशील कोइरालाले ब्रोकलीबाट पूरै प्राप्त गर्न चाहनु भएको छ, तपाईले त्यहि 1500 पाउण्ड भन्दा बढी उपभोग गर्नु पर्छ।
(2) NMN पूरकहरू
यो निकोटिनमाइड मोनोन्युलेलाइटाइड थोक पाउडर धेरै औषधि र ड्रग स्टोरहरू वा प्रयोगशालाहरूमा बिक्रीको लागि उपलब्ध छ। यदि तपाइँ आफ्नो अनुसन्धानको लागि केही चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ एक बल्क अर्डर बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन छुट मूल्यहरूसँग आउँछ र ढुवानी शुल्कमा पर्ख्छ।
NMN को अनलाइन खरिदहरू गर्नाले तपाईंको समय मात्र बचत गर्दैन तर विभिन्न मूल्यहरू तुलना गर्नको लागि उत्कृष्ट प्लेटफर्म पनि प्रदान गर्दछ। यदि तपाइँ अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्न भने, तपाइँ अझै पनि व्यक्तिगत प्रयोगको लागि Nicotinamide Mononucleotidesupplements किन्न सक्नुहुन्छ। अर्डर गर्नु अघि, यो खाना ग्रेड उत्पादन हो भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्।
यो मानसिकता लाग्दछ कि एनएमएनले मानिसको जीवनको अवधि लामो पार्छ। तथापि, यो सतावट माथि रहन्छ। बुबाको बीचमा मृत्युको कारण उमेर-प्रेरित रोगहरूको कारण हो, जुन गरीब सेलुलर प्रकार्यहरूको परिणामको रूपमा आउँछ।
एन्टी-एजिंग निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड केवल सेलुलर इन्धन वितरण सुधार गर्न र कोशिकाहरूको कार्यक्षमता बढाउनको लागि कदमहरू छन्। यसले NAD+ लाई अपरेगुलेट गरेर कार्य गर्दछ, जुन हाम्रो उमेरसँगै घट्दै जान्छ।
विरोधी उमेरका अनुहार क्यान्सरहरू प्रयोग गर्दै, मृस्टुरिस्स, स्यास्कस्क्रिन, वा स्वस्थ आहारमा नियमित व्यायाममा लगाउँदा तपाईंको अनुहार परिवर्तन गर्न सक्छ। तथापि, तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा निपटने को लागी वृद्ध जटिलताओं को मूल कारण को बुझन को आवश्यकता हो। निकोटिनमेड मोनोन्युलेटेइडले क्षतिग्रस्त डीएनए को मरम्मत गरेर, मस्तिष्क, हृदय प्रणाली, मांसपेशीको कार्यलाई सुधार गर्न, र सहनशीलता बढाउने गरी वृद्ध प्रक्रियालाई उल्टाउँछ।
यदि तपाईं निकोटीइनमाइड Mononucleotide थोक पाउडर चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो साथमा जाँच गर्नुहोस् र अनुकूल मूल्यहरूको मजा लिनुहोस्।
मिल्स, केएफ, योशिनो, जे, योशिदा, एस।, एट अल। (2016)। निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटेडाइडको लामो-अन्त प्रशासनले चन्द्रमा उमेर-सम्बद्ध शारीरिक गिरावट। सेल मेटाबेलिज्म।
योशिनो, जे, मिल्स, केएफ, इमई, एसआई, र यू, एमजे (एक्सएनएनएक्सएक्स)। निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटोडाइड, एक प्रमुख एनएडी + मध्यवर्ती, चूहों मा आहार र आयु-प्रेरित मधुमेह को Pathophysiology को उपचार गर्दछ। सेल मेटाबेलिज्म।
यामामोटो, टी, ब्युन, जे, जय पी।, इकडे, वाई।, ओका, एस, र सदोमामा, जे (एक्सएनएमएक्सएक्स)। Nicotinamide Mononucleotide, एक मध्यवर्ती NAD + संश्लेषण, Ischemia र प्रतिरूपण देखि हृदय को रक्षा गर्दछ।
सिन्क्क्लेयर, डीए, उद्दीन, जीएम, युवासन, एनए, र मोरिस, एमजे (एक्सएनएनएक्सएक्स)। NAD + तत्काल Nicotinamide Mononucleotide (एनएमएन) र Obese महिला चूहों मा अभ्यास को छ हप्ताको साथ छोटो अवधि उपचार को प्रमुख प्रमुख।
इमई, एस।, योशिनो, जे, मिल्स, केएफ, जोजियो, ए, एट अल। (2019) Slc12a8 एक निकोटिनमैड Mononucleotide ट्रांसपोर्टर हो। प्रकृति चयापचय।
De Picciotto, NE, Mills, KF, Imai, S., Gano, LB, et al। (2016)। निकोटिनामाइड मोनोन्युलेटेइड अग्नि चूहों संग संवर्तक रोग र ओक्सीडिएटिटिक तनाव को दोश्रो गर्दछ।
याओ, जे., गुआ, जे., यांग, डब्ल्यू, र जिया, पी। (एक्सएनएनएक्सएक्स)। निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटेइड जेएनके सक्रियता लाई अल्जाइमर रोग को रिवर्स गर्न को रोकता छ।
ह्वा, वाई।, वांग, वाई।, जांग, वाई।, लाउटप, एस, एट अल। (2018)। NAD + पूरककरणले परिचय गरिएको डीएनए मर्मत कमजोरीको साथ एक नयाँ एडी माउस मोडेलमा कुञ्जी अल्जाइमरको विशेषताहरू र डीएनए हानि प्रतिक्रियाहरू सामान्य बनाउँछ।
कच्चा निकोटीनामाइड मोनोनक्लियोटाइड (NMN) POWDER (१० 1094--61१-।)